Fepetran'ny serivisy - YTpals
Politika fanafoanana ny famerenam-bola & famandrihana
Hijery ny Refund Policy pejy ho an'ny antsipiriany momba ny famerenam-bola, ary koa ny fanafoanana ny famandrihana.
Manangona vaovao avy aminao izahay rehefa manoratra amin'ny mailakao.
Rehefa manafatra na misoratra anarana amin'ny tranokalanay, raha ilaina dia mety angatahina aminao hiditra ny: adiresy mailaka na fampahalalana momba ny carte de crédit anao.
- Hanodinana ny fifanakalozana
Ny fampahalalana anao, na olom-pirenena na tsy miankina, dia tsy hamidy, hifanakalo na handefasana, na hanome any amin'ny orinasa hafa na inona na inona antony, raha tsy misy ny fankatoavanao, afa-tsy amin'ny tanjona maneho ny fanomezana ny vokatra novidiana na ny serivisy nangatahana.
- Mandefa mailaka tsindraindray
Ny adiresy mailaka omenao dia mety hampiasaina handefasana vaovao, hamaly ny fanontanina, ary / na fangatahana na fanontaniana hafa.
Mampihatra fepetra fiarovana isan-karazany izahay mba hitazomana ny fiarovana ny mombamomba anao rehefa mametraka baiko ianao
Manolotra ny fampiasana mpizara azo antoka izahay. Ny fampahalalana saro-pady / fampindramana omena rehetra dia ampitaina amin'ny alàlan'ny haitao Secure Socket Layer (SSL) ary avy eo dia tafiditra ao anaty tahirin-tsoratry ny mpamatsy vavahady fandoavam-bola mba ho azon'ireo manana alalana manokana miditra amin'ny rafitra toy izany ary takiana izy ireo mba hitazomana ny tsiambaratelo.
Aorian'ny fifampiraharahana, ny mombamomba anao manokana (carte de crédit, isa ara-tsosialy, ara-bola sns) dia tsy hotehirizina ao amin'ny mpizara anay.
Eny (Cookies dia rakitra kely izay ampitain'ny tranonkala na ny mpamatsy tolotra azy amin'ny kapila mafy ataonao amin'ny alàlan'ny tranokalanao (raha avelanao) ahafahan'ny tranokala na ny rafitra mpanome serivisy hahafantatra ny fitetezana anao sy hisambotra ary hahatadidy fampahalalana sasany
Ny mividy matihanina sy / na orinasa ary / na VIP rehetra dia tsy manan-jo hahazo famerenam-bola, ampiharina mafy. Izany dia vokatry ny serivisy an-tserasera eo noho eo. Ny mpikirakira fandoavam-bola dia voaaro ara-dalàna sy ara-dalàna 100%, ary tsy andoavana sarany raha tsy manaiky ny mpanjifa amin'ny fotoana ividianany.
Zonay ny mandà ny serivisy YTpals ho an'ireo mpampiasa manararaotra ny rafitra
Ity politika Fitsipika momba ny serivisy an-tserasera ity dia tsy mihatra afa-tsy amin'ny fampahalalana nangonina tamin'ny alàlan'ny tranokalanay fa tsy amin'ny vaovao voaangona ivelan'ny Internet.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranokalanay, dia manaiky ny fepetra momba ny serivisy an-tserasera izahay.
Fiovana amin'ny fepetra momba ny serivisy
Raha manapa-kevitra ny hanova ny fepetran'ny serivisy izahay dia halefanay eto amin'ity pejy ity ireo fanovana ireo.